Xiisad laga cabsi qabo inay gacan ka hadal isu bedesho oo u dhaxeysa Ciidamada dowlada… – Hagaag.com
Xiisad laga cabsi qabo inay gacan ka hadal isu bedesho oo u dhaxeysa Ciidamada dowlada…
Posted on 2 Abriil 2019 by Admin in National // 0 Comments
Wararka laga helayo degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya iney jirto xiisad laga cabsi qabo iney gacan ka hadal isu bedesho, taasoo u dhexeysa Ciidamada dowladda iyo Ciidamo taabacsan Senator Muuse Suudi Yalaxoow oo ka tirsan Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Sida wararku sheegayaan xiisadan cusub waxa ay daba socotaa amarkii ka soo baxay bishii hore Guddoomiyaha gobolka Banaadir Eng. C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow), kaasoo ahaa in la isaga guuro xerada Mariino ee ciidanka Badda Soomaaliya.
Xiisadan ayaa soo xoogeysatay kaddib markii uu fashilmay labo isku day oo lagu doonayay in Senatorka lagu qanciyo inuu xerada isaga guuro, isagoo xubno isaga wakiil ka ah ay la kulmeen habeen ka hor Madaxweyne Farmaajo iyo kulan uu Guddoomiyaha Aqalka Sare isugu keenay Duqa Muqdisho iyo Muuse Suudi Yalaxoow, waloow wax natiijo ah aan ka soo bixin kulmadaas.
C/qaadir Maxamuud Maxamed oo ka mid ah Odayaasha degmada Kaaraan derisna la ah Senatorka ayaa Warbaahinta gudaha u sheegay in xaafada maalmihii dambe ay ku soo qulqulayaan Ciidan badan oo gaadiidka dagaalka wata, kuwaasoo dhaq dhaqaaq ka bilaabay xaafada, waxaana Ciidanka keensaday Senatorka.
Muuse Suudi ayaa isaga ku andacoonaya in dowladihii hore ay siiyeen dhulkaas, isla markaana uu heysto Document ay u saxiixeen Madaxdii hore ee dalka, maadaama horay dowladii C/llaahi Yuusuf ugu wareejiyay hubkiisa, looguna bedelay xarunta uu deggan yahay.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa bishii hore soo saaray amar ku saabsan in laga guuro Xero Mariino oo ay laheyd Ciidamad Badda, waxaana dhulkaas dhistay Saraakiil ciidan, Mas’uuliyiin iyo Xildhibaano.